Booliska Oslo: Dad badan oo soomaali ah ayuu Corona-virus ku dhacay, qaarna isbitaal ayay u jiifaan. - NorSom News
Booliska Oslo: Dad badan oo soomaali ah ayuu Corona-virus ku dhacay, qaarna isbitaal ayay u jiifaan.
Sida ay daqiiqado kahor noo xaqiijiyeen booliska Oslo oo nala soo xiriiray, dad badan oo soomaali ah ayuu soo ritay xanuunka Corona-virus, halka qaarkood ay isbitaalka la jiifaan.
Sida ay boolisku noo xaqiijiyeen xanuunka ayaa aad ugu faafay xaafadaha ay soomaalidu ku badanyihiin ee Grønland iyo Tøyen ee bydelka Gamle Oslo.
Booliska Oslo iyo dhakhtarka guud ee xaafada Bydel gamle Gamle Oslo ayaa aad uga wel-welsan xaalada soomaalida iyo sida uu cudurkan ugu faafay xaafadaha ay soomaalidu ku badanyihiin. Waxeyna soomaalida ka codsanayaan inay qaataan talooyinka loo soo jeediyay.
Booliska Oslo ayaa soomaalida ka codsanayo inay qaataan awaamiirta dowlada iyo dhakhaatiirta ee la xiriira ka hortaga cudurka, ayna macluumaadkaas isku sii gudbiyaan.
Booliska iyo dhakhtarka ayaa naga balanqaaday inay dib noogu soo gudbin doonaan macluumaad dheeri ah oo arintan ku saabsan. Wixii kusoo kordha, gadaal ayaan kasoo galin doonaa.
Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, fadlan riix halkan, kadibna Subcribe saar(Abonner).
Previous articleMareykankii xooga weynaa oo gargaar Turkiga iyo caalamka kale weydiistay.
Next articleR.W UK oo laga helay Corona-virus.